Welcome to Aayaha Nolosha » ILHAAN CUMAR OO ARRIN CUSUB LA SHIR TAGTAY
ILHAAN CUMAR OO ARRIN CUSUB LA SHIR TAGTAY
January 4, 2019 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Ilhaan Cumar oo ah haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali ah oo loo doortay inay xubin ka noqoto aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa markii loo dhaarinayay xilka loo igmaday waxay la shir tagtay arrin aan horey uga dhicin Koongareska dalka Mareykanka.
Ilhaan ayaa ku soo gashay gudaha aqalka Kongareska lebiska dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, sida caadada u ahaydna madaxeedu wuu dadnaa oo way xijaabnayd.
Sidoo kale Ilhaan ayaa la soo baxday Kitaab Quraan oo ay iyadu wadatay kaasoo ay sheegtay inay ku dhaaranayso, waana laga aqbalay oo Kitaabka Qur’aanka ayaa lagu dhaariyay.
Kitaabkaas ayaa waxa ay sheegtay in horey uu hadiyad ahaan u siiyay awowgeed, waxayna xustay in ay jeclaan lahayd in awowgeed uu goobjoog ka ahaado dhaarinteeda oo uu arko iyadoo ku dhaaranaysa Kitaabkii Qur’aanka ee uu hadiyad ahaanta u siiyay, balse taasi ma dhicin oo awowgeed lama uusan socon, waxaase la socday aabaheed oo ku wehliyay safarkii ay ku tagtay Washington.
23-sano kahor ayaa Ilhaan, aabaheed iyo qoyskooda oo laga soo qaaday xero qaxooti oo ku taala dalka Kenya laga soo dejiyay garoonka Washington, wuxuuna aabaheed u sheegay inuu ku faraxsan yahay in markiisii labaad uu ka dego garoonkaas, isagoo sheegay inuusan ku riyoon in mar dambe uu garoonkaas ka degi doono.
Ilhaan Cumar ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee iyadoo xijaaban fadhiisata aqalka Koongareeska Maraykanka, iyadoo ku labisnayd dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Sidoo kale waa markii ugu horreysay ee qof ku biiraya aqalka Kongareska dalka Mareykanka lagu dhaariyo Kitaab Qur’aan, arrinkaas oo ah mid aan horey uga dhicin Mareykanka, iyadoo sidoo kale ay markii ugu horreysay tahay in qof xijaaban uu fadhiisto Koongareska dalka Mareykanka.